Mihaika ny lalàna vaovao nolaniana momba fiarovam-pirenena tamin’ny fihetsiketsehana tsy misy mpitarika ny Hongkongers · Global Voices teny Malagasy
Farafahakeliny, mpanao fihetsiketsehana miisa folo no voampangan'ny lalàna vaovao momba ny fiarovam-pirenena
Voadika ny 08 Jolay 2020 5:30 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, Ελληνικά, 한국어, English
Mpanao fihetsiketsehana an'arivony nidina an-dalambe tamin'ny 1 Jolay nanohitra ny lalàna vaovao nolaniana momba ny fiarovam-pirenena. Sary avy amin'ny inmediahk.net
An'arivony ny mpanao fihetsiketsehana nanohitra ny fandraran'ny mpitandro filaminana ny fidinana an-dalambe tamin'ny tsingerintaona faha-23 namerenana an'i Hong Kong ho an'i Shina sy tamin'ny andro nandaniana ny lalàna jadona momba ny fiarovam-pirenena ho an'ilay tanàndehibe.
Nitarika fisamborana olona miisa 370 ny fihetsiketsehana tamin'ny 1 Jolay. Voampanga ho nandray anjara tamin'ny famoriam-bahoaka tsy nahazoana alàlana sy ny fanakanana ny fampiharana ny lalàna ny sasany tamin'izy ireo raha voampanga teo ambanin'ny lalàna vaovao momba ny fiarovam-pirenena kosa ny olona miisa 10.
Mpitandro ny filaminana miisa fito no naratra, ny iray voatsindron'ny mpanao fihetsiketsehana teo amin'ny tànany nandritra ny korontana.
Nandrara ny Fiaraha-mientana Sivily Momba ny Zon'Olombelona tsy hanatontosa ny fihetsiketsehana 1 Jolay fanao isan-taona ny mpitandro ny filaminana tany Hong Kong noho ny filazan'izy ireo ny fepetra hamehezana ny fiparitahan'ny valan'aretina ka nahatonga ireo mpanao fihetsiketsehana hivory tsy nisy mpitarika.
Na dia teo aza ny fisian'ny polisy marobe dia mpanao fihetsiketsehana an'arivony no “nandeha niantsena” tany amin'ny tranombarotra lehibe isan-karazany tao Causeway Bay ary nameno ny arabe tany amin'ny manodidina ny 3 ora tolakandro.
Nanenjika nandroaka ireo mpanao fihetsiketsehana hiala ny arabe sy làlankely ny polisy misahana ny rotaka rehefa nandrava azy ireo tamin'ny alàlan'ny tsifitra dipoavatra, kibay ary tsifitra rano alohan'ny niverenan'izy ireo tamin'ny làlan-dehibe indray rehefa hitan'izy ireo fa milamina ny toerana.
Lalànan'ny Fiarovana ao Hong Kong: andro fihantsiana rehefa nipoaka ny fihetsiketsehana tao Hong Kong, manodidina ny 370 ny olona voasambotra. Mpanao fihetsiketsehana an'arivony no nanao fanenjika tamin'ny polisy manerana ny Causeway Bay, Wan Chai, sady nihiaka teny filamatra, nisy manampahefana voatsindron'antsy nandritra ny fifandonana. Nankalaza ny faha-23 taona ny famerenana ny manampahefana.
Feno mpanao fihetsiketsehana nihiaka ny teny filamatra hoe “Fangatahana dimy, tsy alatsaka na dia iray aza” sy ny hoe “ny fahaleovantenan'i Hong Kong irery ihany no lalana hivoahana” ny ankamaroan'ny làlana mifanila amin'ny làlambe:
Aza miraharaha ny fampitahoran'ny AKS, ny governemanta komonista ao Hong Kong, ny polisy ary ny lalàna jadona vaovao, diaben'ny sivily maro ao Causeway Bay mankany amin'ny Zaridainan'i Victoria. Nihiakiaka ilay teny filamatra voarara hoe: “Ny fahaleovantenan'i Hong Kong irery ihany no lalana hivoahana !”
Samy nandresy ny tahotra ny amin'ny fisamborana azy ireo ny tsirairay ka marobe ireo mpanao fihetsiketsehana raha araka ny hita.
Noho ny zava-misy ankehitriny, mahatonga ny polisy mitam-piadiana hanao fisavana ny fihirana fotsiny ny hiran'ny fihetsiketsehana eny an-dalambe:
1 Jolay: Faha 23 taona nanolorana an'i HK
Vehivavy iray no nosakanana ary nosavain'ny mpitandro ny filaminana teo am-pihirana ny “Henonareo ve ny vahoaka mihira” teo akaikin'ny tranombarotra lehibe Sogo.
Lehilahy iray nampiseho ny sainam-pirenenn'i HK no voalohany voasambotra tamin'ny lalàna momba ny fiarovam-pirenena.
Vaovao farany: Tao Causeway Bay, nosamborin'ny polisy teo ambanin'ny Lalànan'ny Fiarovam-pirenena ny lehilahy iray niaraka tamin'ny sainam-pirenenan'i HK. Izy no voalohany voasambotra tamin'ny Lalànan'ny Fiarovam-pirenena.
Mety ho voaratra ara-batana ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana ankoatra ny mety ho fisamborana azy ireo sy ny fanenjehana azy ireo noho ny resaka politika:
Tsy mpanakorontana izahay, mba jereo kely ity horonantsary ity ary ho fantatrareo fa teo foana izahay nifanampy na dia teo aza ny fandrahonana sy ny loza mananotanona. Tena mirehareha amin'ny maha Hongkonger ahy aho.
Nanodidina ny tamin'ny 8 ora hariva, notafihan'ny polisy misahana ny rotaka tamin'ny tsifitra dipoavatra ny tao amin'ny Time Square – toeram-pivarotan-dehibe ao Causeway Bay – ary voasambotra ny mpanao fihetsiketsehana maromaro:
Namintina ny fihantsian'ny mpanao fihetsiketsehana ny afisy lehibe iray. “Tianay …y i Hong Kong” hoy ny fivakin'ny sora-baventy.
Sary nalain'i Oiwan Lam